I-Mia neWallace - izimfudu zamanzi ahlanzekile aseMessina
Izimfudu ezinhle nezithandekayo ze-Aquatic, abangane ngokuphila.
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-5)
Mia e Wallace sono ngenxa izimfudu zamanzi amasha abachitha izinsuku ezimnandi kakhulu ku Messina ethangini labo elinezitshalo eziningi zasemanzini. Kuletha injabulo enkulu emndenini wabo kangangokuba bayabathanda.
I-Wallace: ufudu lwamanzi amnandi othanda ama-shrimp namadada enjoloba
Wallace Muhle futhi uyisimangaliso ufudu lwamanzi amasha ohlala ngaphakathi Messina. Kusukela ngomzuzu wokuqala ingena ECosta House, uthandwa ngokushesha futhi akopishwe ngumndeni owenza konke ukwenza ukuthi angaphuthelwa lutho. Ngokwezinhlobo ze ufudu lwendawo olungamanga, Wallace uyawathanda amanzi. Ihlala kubhavu omuhle omkhulu futhi ovulekile nge ukukhwela izitshalo, isihlabathi esinemibala eminingi enhle nesisodwa ukuthambeka okuntantayo lapho angaphumula futhi adle ngokuphepha. Ngokushesha kufakazela eyodwa ufudu ophilayo, okhuthele futhi onothando olungavinjelwe lwe-shrimp.
Impilo igeleza buthule kuze kufike uMia: uFudu ozoba ngumlingani wakhe wempilo
Wallace uphila izinsuku zakhe buthule futhi eyedwa, kodwa ngemuva kwesikhashana ufika I-MIA, enye ufudu lwamanzi amasha ozoba ngumlingani wakhe omusha wempilo. UWallace ubonakala ejabule ngokushesha futhi umnika isabelo sakhe sokudla. Ngokushesha bahlukaniswa, kuze kube sezingeni elifushane, lapho kunzima khona ukuthola laba ababili manje izimfudu zezingane baqabule ngenkathi bephumula. UWallace uyathanda ngempela ukuba sembizeni yakhe yerabha, lapho azivumela ukuba alale isikhathi eside futhi aziphumulele izikhathi zokuphumula.
UMia: umfanyana wasendlini omncane ka-Wallace
Mia kungenye encane ufudu ekhaya. Ungomunye futhi ufudu lwamanzi amasha wafika kungekudala ngemuva kukaWallace eCasa Costa. Uthathwa ngokuba nenkampani enothando i- "Wallace", Mia kungekudala waba ngumlingani ongenakuphinda ungene ekungeneni kuwo ifomethi.
Ezinsukwini zakhe zokuqala ekhaya, uMia ubukeka ezolile futhi enokuthula, mhlawumbe futhi kungenxa yokushintsha kwekhaya abekade elisebenzisa. Kepha sekudlule amasonto ambalwa kweyodwa entsha indlu yamanzi, uqala ukukhombisa izimpawu zokuqala zomlingiswa wakhe ohahayo futhi odlalayo.
Ufudu olukhazimulayo futhi olusebenzayo: UMia uye waguqula impilo kaWallace
tartarughina uhlala esebenza futhi elambile, uMia umi ngokuphila kwakhe nangejubane lapho eza ukudla. Uthanda ikakhulukazi ukuba sesimweni esithandwayo ayithandayo futhi uyakwazi ukuthatha isikhathi eside, avuke kuphela lapho ezwa umsindo wokudla. Umndeni waseCosta manje ubheka laba ababili izimfudu zasemanzini ingxenye yomndeni futhi abakwazanga ukwenza ngaphandle kobuso babo obumnandi.
I-POSTAL CODE: 98100
Umakhala ekhukhwini: 320 7421585